फूटबलमा ५ नं. र एपीएफ सेमिफाइनलमा | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / फिचर समाचार / फूटबलमा ५ नं. र एपीएफ सेमिफाइनलमा
फूटबलमा ५ नं. र एपीएफ सेमिफाइनलमा
Posted by: युगबोध in फिचर समाचार, संक्षिप्त समाचार April 22, 2019	0 59 Views
बाके (युस)– बाकेको खजुरामा भइरहेको पुरुष फूटबलमा एपिएफ र ५ नम्बर प्रदेश सेमिफाइनलमा पुगेका छन् । एपीएफले ३ नम्बर प्रदेशलाई पराजित गरेपछि यी दुई टीम सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका हुन् । तीन खेलमा शतप्रतिशत नतिजा निकालेको ५ नम्बर प्रदेश एक खेल अगावै सेमिफाइनलमा पुगेको हो ।
आइतवार बिहान आशीष लामाको ह्याट्रिकसहित एपिएफले ३ नम्बर प्रदेशलाई ४–० गोलले पराजित ग¥यो । १४, ६३ र ७० मिनेटमा गोल गर्दै लामाले ह्याट्रिक पूरा गरेका थिए । सुदीप सिम्राकारले २४ मिनेटमा एक गोल गरे ।
चारमध्ये तीन खेल जित्दै एपिएफ सेमिफाइनलमा पुगेको हो । एक खेल अगाडि नै सेमिफाइनलमा पुगेको ५ नम्बर प्रदेश र एपिएफमध्ये को चाहि गु्रप फस्ट हुन्छ भन्ने कुरा ५ नम्बर प्रदेशको अन्तिम खेलमा निर्भर रहेको छ । ५ नम्बर प्रदेशले अन्तिम खेल ३ नम्बर प्रदेशस“ग खेल्दैछ । ३ नम्बर प्रदेशस“ग जीत या बराबरी गर्दा नै ५ नम्बर प्रदेश गु्रप फस्ट हुने ५ नम्बर प्रदेशका प्रशिक्षक सानु तामाङले बताए ।
एक जीत, एक बराबरी खेलेको ३ नम्बर प्रदेश एपिएफस“ग पराजित भएस“गै सेमिफाइनलको दौडबाट बाहिरिएको छ ।
दोस्रो खेलमा गण्डकी प्रदेशले १ नम्बर प्रदेशलाई पराजित गरेको छ । गण्डकीले १ नम्बरलाई ४–० गोलले पराजित गरेको हो । गण्डकीबाट टीकाराज गुरुङले ६ र २१ मिनेट, त्रिदेव गुरुङले ४ मिनेट र विजय श्रेष्ठले २५ मिनेटमा गोल गरेका थिए । खेलमा गण्डकीका टीकाराज गुरुङले ६६ मिनेटमा रेडकार्ड पाएका थिए ।
Previous: पानीको भरमा खेल्छन् खेलाडी
Next: क्रिकेटमा आर्मी र १ नम्बर सेमिफाइनलमा